Dalxiis Gaara 4-Saacadood oo Gaarka ah Makhaayadaha Xalaal ee ugu Dhadhan -
Gudbi ballansi	Tag Back
Mahadsanid! Waxaan dib kuugu soo celin doonnaa tixraac jaaleyntaada 24 saacadood gudahood.
Shuruudaha gaarka ah:
Waxaan kuu rajeyneynaa safar wacan
kooxdaada Xalaal Travel Mart
Ku noqo bogga
Ku bilow safarkan 4-ta galabnimo adiga oo lagaa soo qaadayo hoolkaaga hudheel oo aad u adeegsanayso gaadiid maxalli ah si aad ugu dhadhamiso 8 noocyo kala duwan oo cunto ah 5 ka mid ah cunnooyinka ugu wanaagsan ee Xalaal ee Mumbai. Tilmaamuhu wuxuu si buuxda uga sheekayn doonaa faahfaahinta sida saxan kasta loo sameeyo iyo sidoo kale habka saxda ah ee loo cuno. Waxaan aadi doonnaa 5 meelood oo kala duwan si aan u dhammaystirno socdaalka oo aan u cunno 8 xaaladood oo kala duwan oo cunto ah. Qaadashada hudheelka iyo soo dejinta ee gaadiidka maxalliga ah ayaa lagu daray qiimaha dalxiiska, sida dhammaan cuntooyinka Xalaasha iyo biyaha macdanta. Markaad sahaminaysid suxuunta maxalliga ah, meelaha taariikhiga ah iyo taallooyinka waaweyn ayaa sidoo kale lagu arki doonaa waddada socdaalka, oo ay ku jiraan Boqoradda Victoria Terminus, Dhismaha Shirkadda Dawladda Hoose iyo aragtida Necklace-ka Boqoradda. Ugu yaraan 8da fiidnimo, hagahaagu wuxuu kugu celin doonaa hudheelkaaga.
5ta makhaayadood ee la booqday waxay ku yaalliin Masjid Bunder iyo Mohammed Ali Road.